Amakhasino we-NetEnt | Amakhasino aphezulu we-NetEnt wabadlali baseNingizimu Afrika
Ikhaya / Abahlinzeki begeyimu / amakhasino e-netent e-ningizimu afrika
Amakhasino e-NetEnt e-Ningizimu Afrika
Amakhasino e-NetEnt aseNingizimu Afrika yilezo zikhungo zokugembula eziku-inthanethi ezisebenzisa isofthiwe enhle ye-Net Entertainment futhi zamukela nabadlali abavela eNingizimu Afrika, futhi uzokujabulela ukuzwa ukuthi ambalwa amagumbi ekhasino ahloniphekayo ahlangabezana nalezi zimfuneko. Umhlinzeki wesofthiwe wase-Sweden ubelokhu enza amagxathu amakhulu embonini yezokudlala eku-inthanethi futhi banikezwe imiklomelo eminingi eminyakeni embalwa edlule.
Kepha, uma kubhekwa ukuthi awekho amakhasino e-inthanethi amabili e-Net Entertainment afanayo, kubaluleke kakhulu ukuthola izindawo zokugembula eziphatha abasebenzisi bazo ngenhlonipho futhi zamukele nemali ye-ZAR, futhi yilapho esingasiza khona. Ungahlola uhlu oluphelele Lwamakhasino e-NetEnt aphezulu abadlali baseNingizimu Afrika ngezansi, futhi konke okudingeka ukwenze ukukhetha okulungele izidingo zakho.
Zama Lawa ma Casino we-Netent aku Inthanethi
100% Ize ifike R3,000 ne 200 ama-spins + 55 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Imidlalo ye-Net Entertainment
I-Net Entertainment isibe khona iminyaka eyishumi, kepha kumanje nje lapho u-opharetha eqale ukwamukelwa kabanzi ngomsebenzi wakhe embonini yokudlala ku-inthanethi. Isinqumo senkampane sokugxila ngokugcwele ekuqhikizeni imidlalo emihle kakhulu yamakhasino e-inthanethi iye yaba nemiphumela emihle kakhulu njengoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi okwamanje i-NetEnt ngumhlinzeki ohlaba umxhwele kakhulu phandle lapho, futhi kungenzeka ukuthi nabo abadlali baseNingizimu Afrika bacabanga kanjalo.
Akulona iphutha ukuthi isofthiwe ye-NetEnt yekhasino ithandwe kakhulu emhlabeni wonke njengoba kubonakala sengathi u-opharetha ulalele abasebenzisi bakhe futhi uza nesu lokuwina uma kuziwa ekwakheni izihloko ezisezingeni eliphezulu ezikhanga amakhasimende kuzo zonke izingxenye ezine zomhlaba.
Nakuba eminye imidlalo emihle kakhulu yamakhadi neyetafula ikhiqizwe yi-NetEnt, ngama-slot e-NetEnt ayilethele udumo emhlabeni wonke. Ama-slot e-Net Entertainment avame ukubonakala ebukeka kahle, aqukethe imidwebo emihle ebukeka kahle kudeskithophu, ku-tablet naku-smartphone, kanye nemisindo emihle kakhulu efanayo.
Imidlalo yabo iyakwazi ukwamukela izinhlobo ezahlukahlukene zabadlali be-inthanethi ngenxa yamanani amaningi ohlamvu lwemali namazinga okubheja, ngenkathi imidlalo eminingi yamabhonasi, ama-spin amahhala, ukuphindaphinda (multipliers) kanye nezici ezintsha kwenza ithandwe ngokushesha emphakathini wokudlala ku-inthanethi.
Ama-Slot Nezizumbulu Zemali Ekhula Njalo (Progressive Jackpots) e-NetEnt
Inkampane yaseSweden isiwine imiklomelo eminingi ngemidlalo yayo yama-slot futhi noma ngabe izinkampane encintisana nazo zithuthuka, akekho ongasho ukuthi yonke leyo ndondo ayiyifanele. Ngemuva kokubuyekeza amakhulu ama-slot e-NetEnt kuze kube manje, singasho ngokuphepha ukuthi cishe wonke asifanele isikhathi sakho, kepha, njengoba kwenzeka kaningi, kunedazini evelele esixukwini.
Uma kuziwa emidlalweni enezihloko zamafilimu e-blockbuster noma imibukiso ye-TV, i-Aliens video slot ingeyokuqala efika engqondweni, hhayi kuphela ngoba inezithombe ezinhle kakhulu ezenza abadlali bazizwe beyingxenye yomdlalo, kodwa futhi ngenxa yomzuliswano wamabhonasi ohamba phambili embonini, oshaya cishe njalo futhi imvamisa iklomelisa izinkulungwane zamaRandi.
I-South Park and South Park: Imidlalo ye-Reel Chaos nayo inikeza isipiliyoni esihle sokuzijabulisa, kanti i-Gonzo‘s Quest ne-The Invisible Man ngezinye izihloko ezimbili ezaziwa ngokunikeza izinkokhelo ezihlaba umxhwele ngaphezulu kokunikela ngamahora angapheli emidlalo esezingeni eliphakeme.
I-Net Entertainment ihamba phambili esigabeni sama-jackpot akhula njalo, ne-Mega Fortune slot yayo eyaklomelisa umdlali onenhlanhla inani elihlanyisayo u-$ 17.8 million ngo-2013. Amanye ama-jackpot akhula njalo e-NetEnt ongawabheka abandakanya i-Arabian Nights, i-Tiki Wonders, i-Hall of Gods ne-Cosmic Fortune.
Amakhasino e-NetEnt Izindlela Zokukhokha
Isofthiwe yekhasino ye-NetEnt isidume kakhulu ukuthi izikhungo eziphezulu zemidlalo zilungele ukusebenza no-opharetha owaziwayo kakhulu futhi lokhu kuyizindaba ezinhle kubadlali be-inthanethi, kubandakanya labo abavela eNingizimu Afrika. Ngenxa yalokhu, abasebenzisi baseNingizimu Afrika manje sebekwazi ukukhetha kumakhasino amaningi e-NetEnt futhi kusobala ukuthi bathola lawo amukela amaRandi njengenye yezimali ezivumelekile, bese begwema izindleko zokushintsha imali nezinye izindleko ezingagcina zikhuphule inzunzo yekhasino.
Izindlela zokukhokha ezitholakala kumagumbi amakhasino e-inthanethi zibandakanya Ukudlulisa Imali Ngebhange (Bank Transfers), Amakhadi Esikweleti kanye Namakhadi e-Debit, kepha ama-e-wallets athandwayo kungenzeka ukuthi alungele kakhulu ukugembula ku-inthanethi, ngenxa yokuthi anikela ngamadiphozithi asheshayo nokukhipha imali okusheshayo, imvamisa mahhala, futhi amukele nezinkokhelo nge-ZAR.
Kungani Udlale Emakhasino e-NetEnt?
Njengoba okwamanje izinkampane eziningi zesofthiwe zinikela ngemidlalo yamakhasino e-inthanethi, akulula neze ukukhetha eyodwa noma ezimbili ozithandayo, kepha abaningi bazovuma ukuthi i-Net Entertainment iyona esobala. Ipulatifomu yesofthiwe ye-NetEnt isebenza ngokungenaphutha kudeskithophu, i-tablet naku-smartphone, futhi uma uthanda ukudlala imidlalo ephathekayo, kufanele wazi ukuthi isithole inqwaba yezihloko ezisezingeni eliphezulu zokudlala ngeselula.
Isikrini esibonakalayo somsebenzisi silula ukuzulazula, sishesha kakhulu futhi sigcwele izici eziwusizo ezenzelwe ukusiza abadlali ukwenza ngokwezifiso isipiliyoni sabo sokudlala, ngenkathi idlala kamnandi futhi isebenza ingenazinkinga. Ngakho-ke, imidlalo ye-NetEnt ihamba phambili esigabeni esibaluleke kakhulu futhi ayiphoxi, kungakhathalekile ukuthi unjani umphumela wokudlala.
Njengoba isithathwe njengenye yezinkampane zokudlala ezihola phambili, i-Net Entertainment ingathenjwa ukuthi isebenza kuphela namakhasino athenjiwe namawebhusayithi ahloniphekile ahlala ephatha abasebenzisi bawo ngenhlonipho enkulu, okusho ukuthi ungaqiniseka ukuthi amakhasino aseNingizimu Afrika e-NetEnt ahlinzeka abadlali bawo ngokuphepha kanye nepulatifomu evikelekile lapho imininingwane yabo yezezimali kanye nemininingwane yomuntu siqu igcinwa ivikelekile ngaso sonke isikhathi.
Ukwazi kahle kakhulu ukuthi ama-slot e-NetEnt ayisizathu esenza ukuthi abadlali abavela emhlabeni wonke bavakashele amawebhusayithi ayo, amakhasino asebenzisa le softhiwe ethile avame ukunikeza ama-spin amahhala emidlalweni emisha ye-NetEnt kubo bonke abasebenzisi bawo, ngaleyo ndlela abanikeza esinye isikhuthazo sokuqhubeka nokudlala imidlalo yasekhasino ye-inthanethi.